के हुन्छ बेलाबेलामा वीर्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/के हुन्छ बेलाबेलामा वीर्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ !
‘प्रोस्टेट ग्रन्थीको मुख्य काम वीर्य स्वस्थ राख्ने र त्यसलाई हुर्काउन मदत गर्ने हो । वीर्य त्यतिबेला नियमित उत्पादन भइरहन्छ जतिबेला खर्च हुन्छ । जब वीर्य खर्च हुन छाड्छ अर्थात् स्थिर रुपमा रहन्छ त्यसपछि स’मस्या देखिन थाल्छ । अझ सजिलो गरी बुझ्दा दुई बाल्टीमा पानी भरौँ । एउटाको पानी नियमित फेरौँ तर अर्कोमा नफेरौँ । एक महिनापछि हेर्दा दिनहुँ फेरेको बाल्टीको पानी सफा हुन्छ भने अर्कोमा भने नफेरिँदा लेउ लाग्न थाल्छ । हो त्यस्तै हो वीर्य र प्रोस्टेट ग्रन्थीको सम्बन्ध पनि । जति वीर्य निस्क्यो उति नै प्रोस्टेटलाई फाइदा हुन्छ,’ डा। रौनियारले भने ।चिकित्सकका अनुसार महिना या वर्षौंसम्म यौ’न सम्पर्क नहुँदा प्रोस्टेटमा स’मस्या देखिन्छ । त्यसैले यसबाट बच्नका लागि नियमित यौ’न सम्पर्क गर्ने, २४ घन्टामा पाँच लिटर पानी पिउने, नियमित रुपमा पिसाबको जाँच गरी स’ङ्क्रमणबाट बच्ने र म्यो’ग्नेसियमयुक्त खानेकुरा जस्तै काजु, पेस्ता, बदाम, ओखरलगायत खाने गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ । ***यो समचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।***